Farmaajo, Fahad Yaasiin & Rooble oo kulan xasaasi ah la qaatay M/weyne Qoorqoor.
November 29, 2020 Xuseen 1
Puntlandtimes (Muqdisho)-Madaxweynaha dowladda Federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble ayaa habeenimadii xalay kulan gaar ah la qaaatay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor.
Kulanka oo ahaa mid albaabadu u laabnaayeen ayaa waxaa sidoo kale ka soo qaybagalay Taliyaha hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ee Fahad Yaasiin Xaaji Daajir oo olole xoogan ugu jira dib u doorashada madaxweyne Farmaajo.
Xogo hoose oo warbaahintu heshay ayaa sheegaya in kulanka diiradda lagu saaray arrimo ay kamid yihiin xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo Arrimaha doorashooyinka dhacaya dhammaadka sandkaan 2020/2021 iyo qodobo kale oo qorsheysan.
Mas’uuliyiinta ayaa lagu soo waramayaa inay madaxweyne Qoorqoor kala hadleen inuusan bedelin xubnaha guddiga doorashada iyo inuu kaalin ka qaato ololaha dib u doorashada Farmaajo, iyagoona u sameeyey balanqaadyo kala duwan.
Waxay ilatahay in mar foda lays dari dono 2 dhinac ee siyasada fadaralka somaliya isku haya,Alshababana dhankoda werar & qaraxyo jogto ah socdan,somaliya waxay si gashay xalad khatar ah.